The Wild Toro Slots Bonus will immediately enliven up your mood with a very cartoon like set-up of a small town in Spain, any no misy tsapaka nametraka trano bongo amin'ny olona mivezivezy manodidina eo andamosiny ny voditongotra. Ny foto-kevitry ny slot dia mifototra amin'ny omby-miady amin'ny fanatanjahan-tena malaza ao Espaina ny Matador izay miady amin'ny be omby. Noho izany dia toy ny foto-kevitra fa rehefa imbetsaka ny Matador mitantana ny resiny ny omby na ny lefitra-versa, payouts atao koa ny mpanjifany. Muffled feo ny olona aroso eo aoriana mba hanome anareo mihevitra ny be atao tanàna.
Momba ny Developer ny Wild Toro Slots
Elk Studios dia iray amin'ireo mpandraharaha izay nahavita manao marika eo amin'ny lalao amin'ny lalao toy ny orinasa sy Wild Bloopers Toro slots. Ny developer kevitra ny asa efa-taona lasa soa aman-tsara ary nanolotra 8 lalao mandraka ankehitriny. Ny orinasa dia handeha handroso eo amin'ny sehatra tsy ho ela mijery ny hatsaran'ny gameplay dia manome.
Ny isan-karazany ireo hilokana mianjera eo 0.20 amin'ity lalao Casino-tserasera. Ny fanehoana an'ohatra ny Wild Toro slots dia tena miavaka. Efa ny voasary nivava be tamin'ny antsy in anelanelan'ny, ny raozy, iray voaravaka loko volomparasy mpankafy sy 3 vola madinika volamena samy hafa volafotsy sy ny varahina. Avy eo misy bibidia Wild Toro marika voasoratra mitongilana amin'ny loko mavo napetraka manerana ny miraingiraingy azon'ny toerana. Ny aelezo no tezitra Matador amin'ny volombava kely. Ary misy, mazava ho azy, ny nandeha an'ala ny lalao izay dia tezitra amin'ny tandroka vantotr'ombilahy sy ny lehibe nify mitsiky anao. Roses manolotra anareo ny indrindra ilaina ny 1,000 nahazoan-dalana arahina knifed volomboasary amin'ny 500 coins. Misy 178 paylines mba handresy.
Ny marika Wild manolo ny zava-drehetra afa-tsy ny aelezo ho manao ny tsikombakomba fandresena ho anao. A payline amin'ny Wild marika mirehareha ny ambony indrindra payout. Ny Wild Toro marika hita afa-tsy eo amin'ny fahadimy miraingiraingy azon'ny. Ny ombidia miasa toy ny Mandeha Wild ary manosika horizontally amin'ny tsirairay manerana namoly. Araka ny manosika, dia manova ny Matadors ho tampon-tanety, ary avy eo tahaka ny Wild Nitoetra tamin'ny voalohany miraingiraingy azon'ny. fahazoana 3 Matadors ny reels ny faharoa, fahatelo, ary ny fahefatra reels kaonty ho maimaim-poana indray-kofehy ireny. Ny Matadors mifikitra ny toerana sy ny fanampiny spins avy toy ny Matador iray hafa miseho amin'ny reels.
Wild Toro slots dia mahavariana-tserasera Casino lalao ho an'ny mpilalao izay sitrakao fotsiny mantsy laze manodidina ny Casino slot, ary tsy te hilalao ny mampidi-doza iray. Elk Studios, ny developer no tena fiantraikany lalina tamiko ny gameplay ao amin'ny slot.